रवि लामिछानेसँग चित्त दुखाइन् ऋषि धमला पत्नी एलिजा गौतमले – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /News/रवि लामिछानेसँग चित्त दुखाइन् ऋषि धमला पत्नी एलिजा गौतमले
काठमाडौं । टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले कार्यक्रममा प्रयोग गरेको शब्दप्रति पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी तथा नायिका एलिजा गौतमले आपत्ति जनाएकी छन् ।
बिहीबार प्रशारित ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रममा प्रस्तोता लामिछानेले अन्तर्वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समय नदिएको विषय अभिव्यक्त शब्दप्रति एलिजाले आपत्ति जनाएकी हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्युले अन्तर्वार्ता नदिनु ऋषि धमलाको कमजोरी पक्कै हैन होला, तर तपाईंले त ऋषिमुनिदेखि सिसिमुनिसम्मलाई अन्तर्वार्ता दिन भ्याए मलाइ दिएनन् भन्नु भएछ’, एलिजाले भनेकी छन्, ‘ हुन त हजुरले ऋषिजीलाई ऋषिमुनि नै देख्नु भयो, एक संचारकर्मीले अर्को संचारकर्मीको खेदो खन्नु कतिसम्म उचित हो त्यो त मलाई थाह भएन तर मेरो मन दुख्यो ।’
यसबारे उनले थप भनेकी छन् : रवि लामिछाने दाइप्रति मेरो सधै सम्मान छ । तर हिजो सिधा कुरा जनतसँगमा प्रयोग भएका केही शब्दले मेरो मन दुखेको छ । प्रधानमन्त्रीज्युले अन्तर्वार्ता नदिनु ऋषि धमलाको कमजोरी पक्कै हैन होला, तर तपाईले त ऋषिमुनिदेखि सिसिमुनि सम्मलाई अन्तर्वार्ता दिन भ्याए मलाई दिएनन भन्नु भएछ ।
हुन त हजुरले ऋषिजीलाई ऋषिमुनि नै देख्नु भयो, एक संचारकर्मीले अर्को संचारकर्मीको खेदो खन्नु कति सम्म उचित हो त्यो त मलाई थाह भएन, तर मेरो मन दुख्यो । तपाईको भाषामा ऋषिमुनि अर्थात ऋषिजीले गर्नु भएको मिडियाप्रतिको त्याग कति छ सायद बुझ्दै आउनु भएकै होला ।
उहाँ हप्तामा एसो एक दिन टुप्लुक्क टेलिभिजनमा देखिने व्यक्ति हैनन्, हरेक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म उहाँले गर्नु भएको दुःख र बलिदानलाई कसरी बुझ्ने ? आज आफ्नै साथीको नराम्रो भन्नु भयो । प्रधानमन्त्रीले तपाईसँग नबोल्नु त उहाँहरुकै टिमसँग बुझ्ने हो, ऋषिजीलाई किन जोड्नु हुन्छ ?
याद रहोस् रवि दाइ म हिजो पनि तपाईंको कार्यक्रमको एक दर्शक शुभचिन्तक थिएँ र आज पनि, तर बोल्दा शब्द चयन अलिक बिचार गरेर गर्नेकी ? तपाईंले सिकाएको शिक्षा नै अरुले सिक्ने हुन्, बोलेको शब्दले पछुतो हुने काम कहिल्यै न होस।’